दशैँ अगाडि नै खुल्ने भए काठमाडाैंमा विद्यालय, यस्ता छन् २७ बुँदे मापदण्ड
September 23, 2021 N88LeaveaComment on दशैँ अगाडि नै खुल्ने भए काठमाडाैंमा विद्यालय, यस्ता छन् २७ बुँदे मापदण्ड
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले असोज १० गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको बैठकले सावधानीका उपायहरु अपनाएर विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो । कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे २७ बुँदे मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले जनाएका छन् । सबै विद्यालयहरुलाई २७ बुँदे मापदण्डअनुसार […]
September 23, 2021 N88LeaveaComment on कमजोर बन्दै डलर, बलियो बन्दै नेपाली रुपैयाँ
काठमाडाैं । तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो समय डलरसँग नेपाली रुपैयाँ बलियो बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७८ असार मसान्तको तुलनामा २०७८ साउन मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ०.५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको बैंकले जनाएको हो । बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै बैंकले यस्तो बताएको हो । त्यसो त यस्तो […]
केपी ओलीबारे गगन थापाले गरे निकै तु’च्छ र तल्लो स्तरको टिप्पणी
September 23, 2021 N88LeaveaComment on केपी ओलीबारे गगन थापाले गरे निकै तु’च्छ र तल्लो स्तरको टिप्पणी
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई संसद्सँग घृणा जागेका कारण अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । संसद्प्रति ओलीको घृणा सिङ्गो नेकपा(एमाले)मा पनि पुगेको भन्दै उनले एमालेले संसदीय मर्यादामा बस्न नसकेको बताए । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने – ‘केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकाल […]
केपी ओलीकाे गिदीमा गाेबर भरिएकाे छ : ‘प्रचण्ड’
September 23, 2021 N88LeaveaComment on केपी ओलीकाे गिदीमा गाेबर भरिएकाे छ : ‘प्रचण्ड’
काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि खनिएका छन्। योङ कम्युनिष्ट लिग नेपालको दोस्रो पाँचखाल नगर सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ओली हरूवा र भगौडा भएको बताएका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि ओलीलाई नेपालको महान् नेता बन्ने अवसर भए पनि उनको बुद्धि नपुगेको […]
यी हुन् कांग्रेसको महाधिवेशन बिथोल्न सक्रिय तत्वहरू चिन्नुस् ?
September 23, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् कांग्रेसको महाधिवेशन बिथोल्न सक्रिय तत्वहरू चिन्नुस् ?
काठमाडौं । एमालेभित्रको विवाद नेपाली कांग्रेसमा पनि सर्ने सम्भावना निकै बलियो गरेर बढेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा १४औँ महाधिवेशन गर्न चाहिरहेका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेल समूह महाधिवेश बिथोल्न लागेको छ । पौडेल समूहले महाधिवेशनमा घाटा देखेपछि देउवालाई असहयोग गरिरहेको छ । पौडेल समूहभित्र सभापतिमा पनि एकरुपता छैन । पौडेलले सभापतिमा सहयोग नपाएपछि महाधिवेशन […]
देउवाले पार्टी कब्जा गरे पार्टी फुट्छः शेखर कोइराला
September 23, 2021 N88LeaveaComment on देउवाले पार्टी कब्जा गरे पार्टी फुट्छः शेखर कोइराला
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी कब्जा गर्न ‘गुण्डागर्दी’ शैली अपनाएको आरोप लगाउदै भनेका छन् यदि यो शैली तत्काल बन्द नगरे पार्टी फुट्ने निश्चित भएको बताएका छन् । सर्लाहीको क्रियाशील विवादबारे धर्नामा रहेका कार्यकर्तामाथि प्रदेश २ का युवा मन्त्री सुरेन्द्र सिंहले ‘हातपात’ गरेको भन्दै कांग्रेस कार्यालयमा गरिएको विरोध प्रदर्शनलाई […]
अष्टलक्ष्मीले गरिन नेकपा (एस)मा जाने संकेत, एमालेमा मच्चियाे खैलाबैला
September 23, 2021 N88LeaveaComment on अष्टलक्ष्मीले गरिन नेकपा (एस)मा जाने संकेत, एमालेमा मच्चियाे खैलाबैला
काठमाडौं । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा फर्किने संकेत गरेकी छन् । उनले आफू माधव नेपालकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेको र नेकपा (एस)कै सहयोगमा विश्वासको मत लिने बताउँदै यस्तो संकेत गरेकी हुन् । काठमाडौंको एमालेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सरप्राइज गर्नेगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इन्चार्ज रामबहादुर बादललाई नै दिएपछि शाक्यले कार्यक्रम नै छोडेर […]
ओलीको अडानले भारतमा हलचल: बीबीसीले समेत बनायो यस्ताे रिपोर्ट
September 23, 2021 September 23, 2021 N88LeaveaComment on ओलीको अडानले भारतमा हलचल: बीबीसीले समेत बनायो यस्ताे रिपोर्ट
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरूमा चर्चा भएको छ । भारतका गलत व्यवहारबारे ओलीले पटकपटक आवाज उठाएका छन् । राष्ट्रवादी छबी बनाएका ओलीले ‘नेपालको संविधान जारी गर्दा भारतले धम्काएको’ बताएपछि यो बहसको विषय बनेको छ । भारतले धम्काएको उल्लेख गर्दै एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस […]
आफ्नै प्यारी सासूमाथिसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले चलाए ड’ण्डा : श्रीमती आरजु त’नावमा !
September 23, 2021 N88LeaveaComment on आफ्नै प्यारी सासूमाथिसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले चलाए ड’ण्डा : श्रीमती आरजु त’नावमा !
काठमाडाैं । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयअनुसार पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका १० राजदूत फिर्ता हुने भएका छन् । सरकारको यो निर्णयमा ओली सरकारभन्दा अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका दुई राजदूत शर्मिला ढकाल पराजुली (ओमान) […]
यी हुन् कित्ताकाटमा एकै दिन ५७ लाख घु’स लिने नापीका कर्मचारी
September 23, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् कित्ताकाटमा एकै दिन ५७ लाख घु’स लिने नापीका कर्मचारी
काठमाडौं । सरकारले कित्ताकाट बन्द गरेको छ । तर, नापी कार्यालयका कर्मचारीले प्रतिआना १ लाख लिंदै धमाधम कित्ताकाट गर्दैआएका छन् । घुस असुलेर नापी कार्यालयबाट धमाधम कित्ताकाट गर्ने कार्य भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नापी कार्यालयहरुमा घुस भएपछि कित्ताकाट रोकिंदैन । दररेटअनुसार घुस नबुझाउनेलाई मात्र कित्ताकाट रोक्काको पत्र देखाइन्छ । भनेजति घुस दिनेलाई कित्ताकाट गर्ने […]